The Catholic Church kude kakhulu ngokubhekiselele ukuphakama kaMariya yiyo kwakhona kude oko iBhayibhile ikutshoyo kwakhe.
Pope endlala isiqhumiso phambi oqingqiweyo kaMariya nosana uYesu.
Emfundisweni yabapostile iTestamente Entsha ayikho ngaphandle iimfundiso olwakheka uMariya, ngoko siya kumisela nabo likhohlakele.
Le mfundiso enemvelaphi yayo kwiKumkanikazi yezulu unqulo lobuhedeni
Ngoko ke, oko yimfundiso esimeni ezifunyenweyo kwaye kufuneka kutyhilwa ngokucacileyo. Kukho imbali nge unqulo kwiinkcubeko ezahlukeneyo kwaye nokukhafula le "ukumkanikazi wezulu". emva liqhele kwasuka umva kumfazi likaNimrodi, Semiramis. Ukuba ke unyana wakhe uTamuz, wabiza zombini ukumkanikazi wezulu kunye Ummeli. (1 Num 10:. 8-9).
Nje igama "ukumkanikazi wezulu" na yamaKatolika iCawa, igama elinikiweyo noMariya. Xa ngoko nibona zonke ezi eqingqiweyo kaMariya umntwana oselula, ngoko ongumfanekiselo umfazi uNimrodi kunye nonyana ikopi kubo.
Ngaba besiya bazale yonke iCatechism uthi ngoMariya, kuya kufuneka ukubhenela isithuba esikhulu yona. Oku kunokwenziwa ngaphandle ukuba siza kufumana inkxaso ibango eBhayibhileni, ngoko musa ukuthatha ntliziyo le nto thina. Kufuneka kunokuba abe phezu umnxeba-1 kwabaseKorinte. 4: 6 "Kuba ukuba ufunde umthetho xa kusiziwa kuthi na, ukuba ningazicingeli ngaphezu koko ithi isibhalo."
Ukuba uye New iiTestamente ukufundisa uyafumana umntu bonke zibangelwa kuMariya. Asiyi kufumana kuyo nayiphi na ingongoma nabapostile uMariya Catholic Church ayenzayo. Thina ngoko ukwala ezi mfundiso kuba busekelwe iSibhalo.
Iimfundiso ubungekho kwiinkulungwane zokuqala. Kuyinto kuphela emva kweenkulungwane ambalwa njengoko eqala ukuvela, kwiBhunga laseNicaea ngo-325, ngoko ke e-Efese 431 esiguqula uMariya yabantu nguMama kaThixo. Emva koko ufumana amagama ahlukeneyo förebedjerska, ntombi eqhubekayo, ongenasono, nådeförmedlerska kunye nentsebenziswano redeemers.
The Catholic Church yi kakhulu elide ngokwemiqathango ukuphakama kaMariya yiyo kwakhona kude oko iBhayibhile ikutshoyo ngaye. Kumhlathi 969 yamaKatolika iCatechism ithi oku: "Lo kubeleka linguMariya ukuze ubabalo yaqala ngemvume wanika elukholweni kwi Annunciation kwaye yena ngokuqinisekileyo wanamathela emnqamlezweni. Xa anyukele ezulwini, yena akasalisa umsebenzi wakhe wokukhulula. Iza kuqhubeka ngaphandle kokuphazanyiswa de bonke bedlala egqibelele ngonaphakade. Ngenxa bambongozayo yayo, obuziintlobo ezininzi yena uMtshitshisi sibe izipho yosindiso olungunaphakade .... Ngoko ke Virgin Hayi siyabizwa njengoko Advocate, Patroness, enceda ukuba izicoci ukugqithisa idreyini. "
Oku kubalelwa kuMariya "umsebenzi wakhe wokukhulula." NguYesu, uYesu, oye waba uthumo yokusindisa. Ithi amaKatolika ukuba uMariya naye linaso. Le umenzi wokongeza i-on oko ilizwi likaThixo.
Thelekisa oku kunye lomyalezo kaThixo ocacileyo: "Kananjalo usindiso apho, yaye isibhakabhaka akukho elinye igama ukuba abantu baye ngaye, esimele ukusindiswa ngalo." IZenzo 4:12.
Ingongoma efanayo kakuhle ngaphaya koko izibhalo zithi xa uthi: "Ngoko ke alinakukhuselwa iNtombi" uYesu wasifundisa ukuba sithandaze ngayo: "Kwaye enithe nayicela egameni lam, ndoyenza yona, ukuze uYise azukiswe kuNyana. "John. 14:13. Emva imiyalelo kaYesu, hayi ikwiCatechism yamaKatolika yeCawa, leyo simele ukuba silandele xa sithandaza.
UMariya wazalwa ngaphandle esonweni kwakhona isongezelelo yenziwa yamaKatolika iCawa sele, iBhayibhile ithi bonke abantu bonile (Rom. 3:23). Oku ichaziwe kutshanje nje lemfundiso unyaka 1854th
Ewe, umntu uyamangaliswa kule ngozi kwaye icacise umoya Pope apha ntoni emva koko esekwe le mfundiso, ukuba ke baye kude waphezulu nokholo yamaKatolika. Okokuqala, akukho ukholo kuThixo, oko akafumaneki kwi ilizwi likaThixo, ngoko ke ngoko ke kunoko okwahlukileyo, ukuba uwe etroneni kaThixo xa ukungqina omnye le mfundiso, umthetho-1950 Lowo ziwe ukholo yamaKatolika kufuneka endaweni yoko kubizwa ngokuba ngumqondiso esempilweni na ukuba ubumenemene, ngaphandle absconds iimfundiso ezingekho eBhayibhileni, apho iBhayibhile ithi ukuba siyenze.
Kuba yamaKatolika ababeka ukholo lwabo kweli bandla kufuneka kube nzima nezi ngezisongelo va pfumeli leswaku abantu yokufunda. Mhlawumbi loo nto yenza ukuba uyoyika ukukholelwa kule kwaye kuhlala kweli bandla, ngoko kakuhle le ngxelo kapopu wafumana umyalelo wakhe ukuba zibaqamangele abantu ngakumbi kule nkonzo kwaye iimfundiso ezingekho eBhayibhileni.
Ngaba umKatolika, ikhefu ngale, cela uxolo kunye namava ezinqwenelekayo azincedi yevangeli nenkululeko esempilweni kunye nenkululeko kuYesu Kristu.
Umthandazo kuMariya i likhohlakele
iziko nguMariya iBandla lamaKatolika yokwenene kakhulu yaye into embi kakhulu kukuba le ecace uYesu, uNyana kaThixo, uMsindisi wehlabathi. Oku malunga neminyaka 400 emva kokuba Christian Church yaqala ngePentekoste yowama ukuba Maria iyatshintsha ekubeni indoda eziqhelekileyo umsebenzi nguThixo, ukuba abe ukumkanikazi wezulu, kunye nezinye amagama ezongezelelweyo.
Oku ukusuka ihlelo ukuba isithethe kaMariya eqingqiweyo umntwana ziye ezityalwe kungena Catholic Church.
Le isiko zavela iinkulungwane yamaKatolika iCawa. Ngoko ke, akukho igunya le labantu. Ukholo lwethu lobuKristu lusekelwe phezu kwegunya ngumbhalo kwimfundiso yabapostile, kwaye kusibonisa nokuphakanyiswa sikaMariya ngabikho. Ngoko ke, singakwazi ngesibindi inokusikhulula iimfundiso zayo ngoMariya.
The Catholic Church lwaqalisa ukutenxa encinane evela iimfundiso zeBhayibhile kule ndawo. Kuyinto ukutsala umgca ukuba amahlamvu ukusuka kumgca othe ngqo uya kuba kude imvelaphi, ngakumbi ukuba umgca ingqalelo. Ngoko ke iye yaba kunye neemfundiso malunga uMariya kwi-Katolika.
Oku akubhalwanga na ukuba ukugxeka amaKatolika ngamnye. Wena bakhulele a ngokwesithethe Catholic Church, kulula ukuba tameke ukuya engalunganga le mfundiso. Oku kubhaliweyo ingabonwa njengesixhobo ngamaKatolika ukwaphula le mpilweni ukufunda kwaye namava yonke indlela kaYesu, lowo asindisa, yaye ngaloo ndlela sifanele sithandaze kuThixo.
Kulusizi ukuba qaphela ukuba iBandla lamaKatolika ibandla neemfundiso eziliqela likhohlakele, enye yazo ukunqulwa kaMariya. Eneneni, ngeendlela ezininzi, uMariya uphakeme unyana wakhe, uYesu, oku uthi yonke into ngendlela engalunganga ungafumana.
Akubalulekanga nje ukuba sinyamezele ngeemvaba kunye nobubele olunyulu le ndlela akemanga kakuhle kaMaria siqo-. Thina anenkululeko yokuthetha kwaye ukuba usebenzise ukunceda amaKatolika ukuba kude kwiimfundiso mpilweni ngoMariya.
Ukuba eli nqaku kakhulu yamaKatolika iCawa, nguwo lowo wasekunene. Eneneni, ukugxekwa kakhulu onobulali xa kuthelekiswa noko abantu bakaThixo kulo lonke imbali ziye. Asinguye wonke umntu uyazi ukuba ezo amagama ezinkulu njengoko Wyckliff, Huss, uLuther, Calvin, Melanchthon, Knox, Tyndale, uJohn Wesley wayevakalelwa kukuba kwakuphethe nguye ihenyukazi elikhulu, njengoko kuchaziwe kwiSityhilelo, ukufunda isahluko 17. Le ithi uThixo ukugwetywa kwalo ihenyukazi.
Uninzi Protestant amabandla kwakhona zifakwe oku nokuvuma zabo. nga ngexesha lethu ngoyaba njani oku? njani ukuya ubuhlobo yamaKatolika ngenxa intshukumo ngokubanzi inkolo yakhe? Ngoku lixesha lokuba nathi inkunkuma lokuphela kwexesha, ukuqonda indlela ecace ababengaphambi zethu kwaye kananjalo baqonde ukusilela kwethu.
Simele sithobele uThixo neLizwi lakhe ngaphezu cwaka kwaye amkele eli bandla kunye neemfundiso zalo likhohlakele. sinako enye njani sithi sikholelwa kwilizwi likaThixo size sicinge ukuba eli bandla yenye yazo zonke ezinye iicawa kuphela?
Vecka 30, måndag 26 juli 2021 kl. 18:01